निर्मला पन्त घटनाः ‘एआइजीको प्रतिवेदन गलत, दिलीपमाथि नै अनुसन्धान’ |
निर्मला पन्त घटनाः ‘एआइजीको प्रतिवेदन गलत, दिलीपमाथि नै अनुसन्धान’
प्रकाशित मिति :2020-02-10 11:16:42
ललितपुर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा यसअघि बनेको प्रतिवेदन गलत भएको भन्दै प्रहरीले अर्काे प्रतिवेदन बनाएको छ । डिआइजी सुरज केसी नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको प्रतिवेदन गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ प्रतिवेदनसँगै पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए । ‘डिएनए परीक्षणमा त्रुटि भएको कुरा आएपछि पहिलाको प्रतिवेदनमा रिभ्यु गर्न कमिटी बनेको थियो,’ डिआइजी क्षेत्रीले भने, ‘अब अन्य कोणबाट पनि अनुसन्धानका लागि कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागलाई प्रतिवेदन पठाइएको छ ।’ नयाँ प्रतिवेदनमा दिलीपसिंह विष्ट नै अभियुक्त हुने प्रबल सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ ।
घटनाको करिब एक महिनापछि पक्राउ परेका विष्ट डिएनए नमिलेपछि छुटेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा डिएनए विज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वको छानबिन समितिले डिएनए परीक्षण प्रक्रिया नै गलत भएकाले डिएनएबाट अभियुक्त पत्ता नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । लामो अनुसन्धानमा अन्य कुनै अभियुक्तको सम्भावना नदेखिएको र परिस्थतिजन्य प्रमाणले दिलीप नै अभियुक्त भएको औँल्याइएको छ । सोही आधारमा पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान दिलीपमाथि नै केन्द्रित छ ।
अवकाशअघि दिलीप पक्राउ गर्ने महानिरीक्षकको प्रयास असफल
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसअघि उनले सो घटना सुल्झाउन चाहेका थिए । सबै कोणबाट अनुसन्धान गर्दा दिलीपसिंह विष्ट नै अभियुक्त भएको खुलेको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्ने उनको तयारी थियो । तर, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमति नदिएपछि उनी पछि हटेका छन् ।
विष्टलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन उनले आफ्नो सचिवालयका केही प्रहरीलाई कञ्चनपुरमा काज खटाएका थिए । तर, पक्राउको अनुमति नआएपछि उनीहरूसमेत फर्किएका छन् । पहिला प्रमाण नष्ट गरेको र वास्तविक अभियुक्त जोगाउन खोजेको भनेर प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेकाले कानुनी रूपमा फेरि दिलीपलाई नै पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीविरुद्ध चलेको मुद्दाको अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्र दिलीपविरुद्ध मुद्दा लैजाने मिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूको तर्क छ । ‘सुरुमै प्रहरीले एकपछि अर्काे गल्ती गर्दै गयो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आफ्नै गल्ती सुधार्न नसक्ने अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व पुगेको छ ।’ प्रहरी नेतृत्व सामूहिक ढंगले चल्न नसक्दा यस्तो समस्यामा प्रहरी परेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यति गम्भीर विषयमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक खनालले उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेर रणनीति नबनाई दबाबका भरमा निर्णय गर्दै गएका थिए ।
दिलीपविरुद्ध के–के छन् प्रमाण ?
घटनाको डेढ वर्षपछि परिस्थितिजन्य प्रमाण र स्थानीयको भनाइका आधारमा दिलीप नै यो घटनाका अभियुक्त भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । उनले प्रहरीसँग गरेको बयान र घटना प्रकृति ठ्याक्कै मिल्ने भएकाले त्यो नै विष्टविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनले प्रहरीसामु देबे्र हातले घाँटी अठ्याएर आफूले निर्मलाको हत्या गरेको बताएका थिए । रिपोर्टमा देब्रे हात नै प्रयोग भएको आएको थियो । निर्मलाको सुरुवाल फाटेको भनेर उनले बताएका थिए, जुन कुरा प्रहरीको मुचुल्कामा थिएन । तर, निर्मलाकी आमालाई थाहा थियो । निर्मलाको साइकल बिग्रिएपछि बनाइदिने बहानामा आफूले नै खोलापारि लगेर बलात्कार गरेर उखुबारीमा फालेको बताएका थिए ।
उनको भनाइ र घटनास्थलको अवस्था ठ्याक्कै मिलेको थियो । सोही आधारमा निर्मलाकी आमाले उनी नै अभियुक्त भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यस्तै, त्यो दिन विष्टलाई घटनास्थलनजिकै देखेको भनेर दुई स्थानीयले कागज गरिदिएका छन् । घटनापछि तीनजना महिलालाई उनले यौन दुव्र्यवहार गरेको विवरणसमेत प्रहरीले स्थानीयमार्फत संकलन गरिसकेको छ । अर्का एक स्थानीयसँग निर्मलालाई मारेको भनेर स्वीकार गरेको भिडियोसमेत प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, सिआइबीबाट खटिएका अन्य अनुसन्धान अधिकृतहरूले समेत दिलीप नै अभियुक्त हुने परिस्थिति देखिएको भनेर रिपोर्ट दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यी सबै विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
दिलीपलाई पक्राउ गर्नकै लागि महानिरीक्षक खनालले गत १९ माघमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिले शुक्रबार महानिरीक्षक खनाललाई रिपोर्ट बुझाएको हो । समितिमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डिएसपीहरू अवदेश विष्ट, गणेशबहादुर श्रेष्ठलगायत थिए । १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साथीको घरबाट फर्कदै गर्दै १० साउन २०७५ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो ।
यातना दिएर बयान लिएको आरोप
एआइजी बस्नेत नेतृत्वको समितिले प्रहरीलाई यातना दिएर बयान गराएको आरोप लागेको छ । यसअघि हवल्दार धर्मसिंह भाटले दिलीपसिंह विष्टको घरबाट सर्टको गोजी च्यातेर आफूले घटनास्थलमा लगेर फालेको बयान दिएका थिए । आफ्नो अप्रेसन गर्ने वेला भएको, तर नजरबन्दमा राखेर यातना दिएपछि सबै कुरा हो भनेर बयान गर्नुपरेको कागज उनले गरेका छन् । भाट र अर्का हवल्दार धर्मसिंह विष्टले सोही कारण राजीनामा दिएका थिए । अहिले उनीहरूले आफूहरूलाई यातना दिएर झुटो बोल्न लगाएको भनेर कागज गरिदिएका छन् । त्यतिवेला प्रहरीहरूलाई विभिन्न गणभित्र राखेर बयान लिइसकेको थियो । यातना दिएर बयान गराइएको र आफूहरूको कुरा नसुनी हचुवाका भरमा रिपोर्ट दिएको ती प्रहरीहरूको दाबी छ । सबै घटनामा भौतिक प्रमाण हुँदैन । धेरैजसो घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाण र अभियुक्तको बयानलाई नै आधार मानेर मुद्दा दायर हुने गरेको छ ।
के छ नयाँ प्रतिवेदनमा ?
नयाँ प्रतिवेदनमा विगतका प्रतिवेदनले द्विविधा उत्पन्न गरेको र नयाँ तथ्य प्रकाशमा आएकाले घटनाको सन्दर्भमा निश्चित सांगठनिक धारणा बनाउन आवश्यक भएकाले पुनरावलोकन समिति बनेको उल्लेख छ । यो समितिले एआइजी नेतृत्वको समितिका १३ वटा त्रुटि औँल्याएको छ । तत्कालीन अनुसन्धानलाई नजरअन्दाज गरेर महŒवपूर्ण उपलब्धिलाई अमान्य घोषित गरेको तथा अनुसन्धानको प्रगतिलाई शून्य घोषित गरेको उल्लेख छ ।
सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने मान्यताबाट निर्देशित रही अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीलाई दबाब दिएर बयान गराएको, मिडिया र आन्दोलनको दबाबका भरमा प्रमाण संकलनलाई शून्य घोषित गरेको, अन्य प्रतिवेदन र बयानलाई मात्र अनुसन्धानको आधार बनाएको, पछि भेटिएको सर्टको टुक्रालाई प्रमाणका रूपमा अस्वीकार गरेको, दिलीपसिंह विष्टको चालचलन, पृष्ठभूमि, भिडियो बयानलाई नजरअन्दाज गरिएको पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी जवान चाँदनी साउदले गरेको बयानमा पोलिग्राफ परीक्षणमा झुटो बोलेको नदेखिएको, तर पूर्वमानसिकतालाई पुष्टि गर्ने प्रकारका प्रमाणलाई मात्र स्वीकार गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘स्थानीयस्तरमा देखिएको विषय परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योल बढ्दै गएका कारण देशैभर विकसित हुँदै गइरहेको प्रहरी र सरकार विरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरु बस्नेतज्यूको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।
छानबिन समिति मुख्य गरी बयानमै मात्र आधारित हुनु, अफवाहका आधारमा आफ्ना धारणा बनाएका व्यक्तिहरूको बयानमा स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धानका त्रुटि औँल्याइएकाले छानबिन समितिले सोही आधारमा आफ्नो धारणा बनाई निष्कर्षमा पुग्नु र मुख्य गरी जनस्तरमा फैलाइएका अफवाह र अनुसन्धान समूहको विरुद्ध गरिएका नकारात्मक टिप्पणीबाट प्रभावित वा दिग्भ्रमित भई आफ्नो सम्पूर्ण छानबिनलाई सोही दिशातर्फ निर्देशित गर्नुलगायतका कारणले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको’ उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका